Izicelo zokuthola imali: yiziphi ezihamba phambili | Ezezimali Zomnotho
Encarni Arcoya | 19/05/2021 17:40 | Kubuyekezwe ku- 19/05/2021 19:16 | Ukuphela kwenyanga
Thola imali. Ngokudabukisayo, impilo isuselwa emalini umuntu angayithola noma abe nayo. Uma uthola okuningi ungaphila kangcono. Futhi okuncane onakho, lapho kunezidingo eziningi. Kungakho abantu abaningi, noma ngabe banomsebenzi noma cha, bahlala befuna indlela enhle yokuthola imali. Futhi ngokubukeka nokuhlanganiswa kwama-Smartphones, manje asebusa izimpilo zethu, izicelo zokuthola imali ziyiqiniso.
Linda, awubazi yini? Ngokulandelayo sizokhuluma ngakho ungayithola kanjani imali nge-smartphone yakho, okukuzo lezo zicelo zokuthola imali ezingakunika "umvuzo omkhulu" ngokungeziwe ekupheleni kwenyanga. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
1 Izicelo zokuthola imali, ingabe zithembekile?
1.1 Ngabe wenza imali eningi ngokwenza izinhlelo zokusebenza zemali?
1.2 Ingabe zithembekile?
1.3 Wenzani ngolwazi lwangasese engikunikeza lona?
2 Zisebenza kanjani izinhlelo zokusebenza ukuthola imali?
3 Izicelo zokuthola imali, yiziphi ezikhona?
3.1 Uhlelo lokusebenza lwemali
3.2 Isipho Hunter Club
3.6 Imivuzo ye-Google Opinion
Izicelo zokuthola imali, ingabe zithembekile?
Impela ngemuva kokufunda okungenhla, ube nokungabaza ukuthi ngabe kunokwethenjelwa, kusemthethweni futhi ikakhulukazi uma ungenza imali yangempela (okungukuthi, imali enkulu kakhulu). Ngakho-ke, ukuxazulula yonke le mibuzo, sizokushiya lapha uchungechunge lwemibuzo ebuzwa njalo engahle ikuthinte ekhanda.
Ngabe wenza imali eningi ngokwenza izinhlelo zokusebenza zemali?
Iqiniso ukuthi cha. Ungacabangi ukuthi, ngokuba nohlelo lokusebenza olusiza ukuthi uthole imali, uzothola izibalo zezinkanyezi. Into ejwayelekile ukuthi uhola ama-euro ambalwa ngenyanga. Kepha okuhle ukuthi ngokuhamba kwesikhathi lawo ma-euro angaba enye into, futhi kwabanye ukuthi omunye angabi kubi nakancane.
Ngaphezu kwalokho, futhi kuya ngohlobo lwesicelo, isikhathi onaso nokuthi umvuzo uyini. Isibonelo, ake ucabange ukuthi ukhokhelwa ukudlala, futhi uchitha amahora namahora ukukwenza. Akufani nomuntu ogqoka isigamu sehora kuphela.
Inqobo nje uma uwalanda kumasayithi aphephile, yebo, kufanele athembeke futhi ngeke kube nankinga ukuwasebenzisa. Qaphela ukuthi izinhlelo zokusebenza eziningi ukuthola imali abakwenzayo ukusebenza njengabaxhumanisi phakathi kwezinkampani nabantu. Abangaphambili banikela ngemikhiqizo yabo noma izinsiza abasebenzisi abazame futhi, ngasikhathi sinye, bayizuzele imali encane ngayo.
Futhi izinkampani zitholani? Imininingwane; wazi ukuthi uziphatha kanjani ngemikhiqizo yabo, ukuyithuthukisa noma ukubona ukuthi bangaba nomphumela omuhle emhlabeni (lokho kungabenza babe usozigidi).
Wenzani ngolwazi lwangasese engikunikeza lona?
Njenganoma iyiphi enye inkampani, izicelo zokuthola imali kufanele futhi zithobele ukuvikelwa kwemininingwane yakho. Noma kunjalo, uma ungabaza, sincoma ukuthi ngaphambi kokubhalisa ufunde inqubomgomo abayilandelayo ngokucophelela, lapho kufanele bachaze khona ukuthi benzani ngolwazi abaluthathayo, ukuthi baluvikela kanjani, uma belwabelana nabantu besithathu, njll.
Uma ungalutholi lolo lwazi, unezinketho ezimbili: babhalele ukuthi balunikeze noma bangabhalisi. Inkampani engafihli lutho iphakamisa ukungabaza lapho isebenzisa uhlelo lwayo lokusebenza.
Zisebenza kanjani izinhlelo zokusebenza ukuthola imali?
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi izicelo ezikunika imali zisebenza kanjani? Iningi labo linezinyathelo ezifanayo: landa uhlelo lokusebenza kuselula yakho, bhalisa kulo futhi ufeze abakucela kona ukuthola imali oyilindele kudala oyifunayo.
Lokhu ngokuvamile akususelwa “emalini” uqobo lwayo (noma ngabe kukhona okunye) kodwa kumaphoyinti owatholayo nokuthi kamuva ungashintshisana ngawo ngemali, noma izipho, nganoma yini oyithandayo.
Phakathi kwemisebenzi yalolu hlobo lwezinhlelo zokusebenza ukuhlola izinhlelo zokusebenza noma imidlalo, ukubuka amavidiyo wokukhangisa, ukwenza ucwaningo ... Iqiniso ukuthi abakuceli okuthile okunzima kakhulu, yingakho inani lemali olitholayo ngalunye lincane. Kepha uma uyisebenzisa kakhulu, ungazuza kakhulu.
Vele, kufanele uqaphele kwezinye izicelo ukuze uthole imali, ikakhulukazi uma bekucela ukuthi unikeze inombolo yakho yocingo. Kungani? Ngoba ezimeni eziningi abakwenzayo ukubhalisela insizakalo ekhokhelwayo, futhi ekugcineni uhlelo lokusebenza lubiza kakhulu kunalokho obukufuna.
Izicelo zokuthola imali, yiziphi ezikhona?
Futhi manje sizogxila kakhulu kokuthokozisayo. Yiziphi izinhlelo zokusebenza zokuthola imali ezikhona? Iqiniso ukuthi kuningi, kepha asincomi ukuthi usebenzise okuningi ngaphandle kwalapho unesikhathi esidingekayo. Futhi, uma ugxila kokukodwa noma ezimbili, uzothola imali ethe xaxa kulabo futhi lokho kuzokusiza ukuthi ufinyelele umkhawulo wokucela leyo mali.
Uma uhlukahluka, uzoba nakho ama-akhawunti amaningi anemali encane ongeke ukwazi ukuyithola ngoba awufinyelelanga kubuncane bokuqoqa.
Lokho kusho ukuthi, izicelo zokuthola imali esizincomayo yilezi:
Lolu hlelo lokusebenza lwamahhala lwe-Android ne-iOS luzokucela ukuthi unikeze imibono, udlale imidlalo, uzame imikhiqizo nezinsizakalo ... futhi, ngokubuyisela kuzokunika imali.
Ukuyisebenzisa, kuzofanele ubhalise futhi uhambe ukuqongelela imivuzo ongayishintshanisa ngemali. Vele, uzodinga i-akhawunti ye-Paypal. Okuhle ukuthi uthola inkokhelo ezinsukwini zebhizinisi ezingama-2-3 (lokhu akuvamile ukwenzeka, ngoba abaningi bakhokha kanye ngenyanga noma bathatha amasonto ukuqedela inkokhelo).
Isipho Hunter Club
Lolu hlelo lokusebenza, olunekhasi lewebhu, luzokukhokhela ukuze ubuke amavidiyo, uzame ezinye izinhlelo zokusebenza, wenze izinhlolovo noma ubambe iqhaza emincintiswaneni. Uzoqoqa amaphuzu kamuva ashintshaniswa ngemali (ethunyelwe kuwe yi-Paypal) noma ngezipho.
Lolu hlelo lokusebenza vuza lowo othunyelwe kuye, okungukuthi, abantu ababhalisa ngawe (ngoba ukwazisile futhi ufake ikhodi yayo). Ngale ndlela, uhola u-10% walokho okudluliselwe kwakho okutholayo kanye no-5% walokho okudluliselwe khona. Lokho wukuthi, ungazitholela okwengeziwe okungu-15% ngaphezulu.
Okuwukuphela kokubi ukuthi itholakala kuphela ku-Android.
Uma uthanda ukuzithola, nansi enye yazo. Kuluhlelo lokusebenza lapho, uma usuqede iphrofayili yakho, bazokuthumela ucwaningo noma ohambweni okufanele uluqede emini ukuze uthole imivuzo, ngale ndlela, nemali. Vele, udinga ukuqoqa ama-euro ayi-10 ukuyicela.
Itholakala kuzo zombili i-iOS ne-Android.
Uyakuthanda ukuthatha izithombe futhi uhlala uthatha izithombe? Yebo, uyazi ukuthi ungazuza ngabo. Lolu hlelo lokusebenza likuvumela ukuthi ulayishe izithombe ezithathwe ngeselula yakho ukuze zikunikeze isilinganiso. Futhi uma sikhuphuka, isithombe sizoya ngokwengeziwe, sikwazi ukusuka ku- $ 5 kuye ku- $ 100.
Uma ulungile kulokhu, lolu hlelo lokusebenza lungakulungela, futhi ungakuthola imali eningi naye (Okubalulekile ukuthatha izithombe ezisezingeni bese ugcwalisa amalebula ngangokunokwenzeka ukuze ufinyelele kusesho abakwenzayo).
Lolu hlelo lokusebenza lwaduma isikhashana esedlule. Eqinisweni, kwavezwa ngisho nasezikhangisweni zethelevishini. Inhloso icacile: kufanele uthathe izithombe zamathikithi okuthenga ezitolo ezinkulu bese uzifaka kuhlelo lokusebenza. Uma kutholakala ukuthi uthenge imikhiqizo abayikhethayo, bakunikeza imali ongayikhipha kamuva ku-ATM.
Umkhiqizo ngamunye unomvuzo ohlukile; kuzoba namasenti ayi-10 noma i-euro elilodwa. Futhi ubuncane bokucela inkokhelo ngama-euro angama-20.
Inkinga ukuthi uhlelo lokusebenza lubala kuphela eminye imikhiqizo, futhi uma ungazithengi, awusoze wamukela lutho (kufanele kube yimikhiqizo oyithenga njalo njalo). Bheka ukuthi iziphi ozonquma ukuthi ngabe lolu hlelo lokusebenza lulungele wena noma cha.
Imivuzo ye-Google Opinion
Lesi ngesinye sezincoma kakhulu kimi. Kuyiqiniso ukuthi abahlali bekuthumelela ucwaningo, ukuthi izinsuku, amasonto noma izinyanga zingadlula ngaphandle kweyodwa, nokuthi bakukhokhela okuncane. Kepha izinhlolovo zemibuzo eyi-1-2 futhi ziyashesha ukuphendula. Ngaphezu kwalokho, imali oyiqongelelayo ingasetshenziswa thenga amageyimu, ama-movie, umculo noma izinhlelo zokusebenza ezikhokhelwe nge-Google Play Isitolo ngaphandle kokukubiza lutho.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ilondoloza » Ukuphela kwenyanga » Izicelo zokuthola imali